Abaalmarinta Caddaaladda - Argagixisnimo Loo Raadinayo - Abu Ubaidah (Direye)
Abu Ubayda (Diireye) waa hoggaamiyaha al-Shabaab. Af-hayeenkiiAl-Shabaab, Axmed Cabdi aw Maxamed, taariikhda markay ahayd 6da bisha Seteember, 2014 uu sheegay in Abu Ubayda yahay hoggaamiyaha kooxda, kadib markii uu geeriyooday hoggaamiyihii hore ee kooxda Al-Shabaab amiir Axmed Cabdi aw-Maxamed (Godane). Xilligii Godane la dilay Abu Ubayda wuxuu ahaa qof aad ugu dhowaa . Qaramada Midoobay [United Nations (UN)] taariikhda markay ahayd 24ka bisha Seteember, 2014 waxay ku soo rogtay cunnoqabatayn iyagoo u tiigsaday baragaraafka 8aad ee Qaraarka Guddiga Amniga ee Qaramada Midoobay ee soo baxay 1844.
Waxaa la rumaysan yahay inuu aaminsanaa aragtidii Godane oo ahayd in al-Shabaab aysan kaliya ahayn urur udhaqdhaqaaqa muwaadinniinta Soomaalida balse ay yihiin kuwa safka hore ugu jira jihaadka caalimiga ah ee ururka al-Qaida ay wadaan.
Sida amiirka ururka, Abu Ubayda wuxuu si toos ah mas’uul uga yahay howlaha dhaqdhaqaaq ee ay al-Shabaab wadaan, kaasoo weli khatar ku haya nabadda, amniga, iyo xasilloonaanta danaha Soomaaliya iyo tan Maraynkan ee deegaankaas. Waxaa la aaminsan yahay inuu jiro afartimeeyo una udhashay qabiilka Dir uuna ka soo jeedo deegaanka Kismayo ee Soomaaliya.
Naanays: Sheekh Axmed Umar Abu Ubayda, Sheekh Cumar Abu Ubayda, Sheekh Axmed Umar, Sheekh Mahad Cumar Cabdikariim, Abu Ubayda, Abu Diiriye, Diiriye